रेल « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
रेलमार्गका लागि सरकारले छुट्यायो १० अर्ब ३ करोड
आगामी वर्ष जयनगर–जकपुर, कुर्था–विजलपुरा र जोगबनी–विराटनगर क्षेत्रमा रेल सेवा सञ्चालन गरिने पौडेलले बताउनुभयो । बर्दिबास स्टेशनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
एजेन्सी । सामाजिक सञ्जाल प्रायः युवा युवतीहरुबीच प्रख्यात ‘टिकटक’ बनाउनको लागि रेलमार्गमा हिडिरहेका एक युवकको रेलको ठक्करबाट मृत्यु भएको छ । पाकिस्तानको राजधानी शहर इस्लामाबादनजिकै शाह खालिदको छिमेकमा पर्ने रावलपिंडी
माघमा रेल चल्छ
काठमाडौं । गत असोजमा नेपाल भित्र्याइएको रेल चार महिनापछि सञ्चालनमा आउने भएको छ । आउँदो माघभित्र रेल सञ्चालनको तयारी भइरहेको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार रेल सञ्चालनका
काठमाडौं । कोरियाली रेलमार्ग अनुसन्धान संस्थान ‘कोरेल’ले विश्वको सबैभन्दा द्रुतगतिमा कुद्ने रेलको सफल परीक्षण सम्पन्न गरेको छ । ‘कोरेल’को पछिल्लो रेल संस्करण हाइपरट्युब रेल प्रतिघण्टा एक हजार किलोमिटरका दरले कुद्न
पालले छोपेको रेल माघ महिनाभित्र चल्ने
काठमाडौं । सरकारले दुई महिना अघि भारतबाट ल्याएको रेल माघभित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जयनगर कुर्था रेलमार्गमा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाएको छ
रेलवे लिकको क्लिप चोरिएको चोरियै, रेल सञ्चालनमै अन्योल
जनकपुरधाम, मंसिर १८ । रेल सञ्चालन नहुँदै जनकपुरधामस्थित रेलवे लिकको क्लिपलगायतका सामग्रीहरु चोरी हुन थालेको छ । गएको असोज २ गते विधिवतरुपमा परीक्षण गरिएको रेल गुड्ने रेलवे लिकको क्लिपलगायतका सामग्री
‘रेल्वे लिक’को ‘क्लिप’ चोरेर कवाडमा बिक्री !
काठमाडौं, कात्तिक २८ । निर्माण सम्पन्न भएर औपचारिक उद्घाटनको पर्खाइमा रहेको जयनगर–कुर्था रेलमार्गमा ‘रेल्वे लिक’मा रहेका ‘क्लिप’ चोरी हुन थालेको छ । ३५ किलोमिटर मार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाली रेल
कोरोना कम हुनासाथ नियमित रेल सञ्चालन हुन्छः मन्त्री नेम्वाङ
काठमाडौं, असोज ५ । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै भौतिक पूर्वाधारमा फड्को मार्नुपर्छ भन्ने धारणा विकास भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ बताउनुहुन्छ । रेलको विगत हेर्दा सन् १९३७ सालदेखि
डेढ वर्षमा बर्दिवास-वीरगञ्ज रेल गुड्छ !
सर्लाही । महोत्तरीको बर्दिवासदेखि पर्साको वीरगञ्जसम्मको १३६ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये ७० किलोमीटरभन्दा बढीमा ब्लास्ट र ट्र्याकमा पटरी ओछ्याउने बाहेकका अन्य काम सकिएको छ । बर्दिवासदेखि वीरगञ्जसम्मको १३६ किलोमिटर रेलमार्गको जङ्गली क्षेत्रमा